Kpido: cms | Martech Zone
Ịnweta usoro ikpo okwu ọnụ ahịa na-aga n'ihu na-adọrọ mmasị, na usoro njikwa ọdịnaya (CMS) adịghị iche. M na-arụ ọrụ na a ọnụ ọgụgụ nke proprietary, oghe-isi iyi, na-akwụ ụgwọ CMS nyiwe ihe karịrị afọ… ụfọdụ ịrịba na ụfọdụ nnọọ ike. Ruo mgbe m ga-amụta ihe a ahịa 'ebumnobi, akụrụngwa, na usoro bụ, Anaghị m eme nkwanye na nke ikpo okwu nagide. Ọ bụrụ na ị bụ obere azụmahịa nke na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ iri puku kwuru iri puku dollar
Nyiwe Enterprise Management (ECM) na-aga n'ihu ịkwalite onyinye ha, ọ bụghị naanị ịghọ akwụkwọ, mana ị na-enye ọgụgụ isi maka usoro azụmaahịa. GRM's Content Services Platform (CSP) karịrị usoro njikwa akwụkwọ. Ọ bụ azịza ebe enwere ike ịmepụta dọkụmentị enwere ike ịmekọrịta arụmọrụ azụmahịa. GRM's CSP na-enye ohere ka sistemụ njikwa ọdịnaya (CMS) jikọta nchịkọta data, mmụta igwe, nyocha data nwere ọgụgụ isi, yana sọftụwia DMS iji jikwaa dọkụmentị, nsuso nsụgharị,